Madaxweyne Ku Xigeenka Kiiniya Oo Ka Guulaystay Maxkamada Danbiyada Ee Caalamiga Ah - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Ku Xigeenka Kiiniya Oo Ka Guulaystay Maxkamada Danbiyada Ee Caalamiga Ah
Madaxweyne Ku Xigeenka Kiiniya Oo Ka Guulaystay Maxkamada Danbiyada Ee Caalamiga Ah
Hargeysa(SLpost)-Xaakimada Maxkamadda Racfaaka ee Maxkamadda Danbiyda ee Caalimiga ah ayaa buriyay go’aan ay tahay in lagu qaato qoraalo marqaatiyaal hore ay sameeyeen oo la xidhiidha dacwad ka dhan aheyd madaxweyne ku xigeenka, Willian Ruto.
Mr. Rugo ayaa loo heystay eedeymo la xidhiidha dabiya ka dhan ah bani’aadaninimadda in dad badan oo lagu dilay doorashada dalkaasi ka dhacday sanadkii 2007dii.
Dacwadii ka dhanka aheyd, Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa mar hore fashilantay. Waxaa jiray eedeymo la xihiidha cabsigalin iyo laaluush, iyadoo marqaatiyada inta badan ay la noqdeen warbixinadii ay qoreen.
In ka badan kun qof ayaa lagu dilay dagaal qabyaaladda salka ku haya ee dhacay codbixintii ka dib sanadkii 2007dii. Marka laga gudbo Mr. Ruto iyo Mr. Kenyatta, tiro kale oo isku jira siyaasiyiin, suxufiyiin ayaa lagu soo oogay dacwada la xriira danbiya ka dhan ah bani’aadaninimada.